१३ जेठ,मानिसलाई चेतनशील प्राणी मानिन्छ । सोही कारण पृथ्वीका लाखौँ जीव प्रजातिहरुमध्ये मानव जाति सभ्य, सुशील र चेतनशील मानिन्छ । अरु जीवजन्तुको चेतना र सभ्यताको स्तरभन्दा मानवीय सभ्यता र चेतनाले धेरै तह पार गरिसकेको छ ।त्यसैले त मानिसले आफूलाई परिष्कृत बनाइसक्दा पनि जनावरहरु जहाँको त्यहीँ रहेका छन् । पढाइ मात्रै होइन, मानवीय जीवनशैलीमै व्यापक परिष्कृति आइसकेको छ । अन्य जनावरहरु प्रकृतिको सृष्टि जसरी हुन्छ सोही अनुसारकै जीवनशैलीमा रमाएर देहान्त गर्छन् तर मानवले भने बाँचिरहँदा खानपान, लगाइ, सिकाइ आदि यावत् कुरालाई ध्यान दिइरहेको हुन्छ ।
भलै मानिसले पनि निश्चित समयमा अन्य जनावरजस्तै मृत्यु स्वीकार्नैपर्ने बाध्यता छ । विश्वका मानिसहरु कपडा लगाएर सञ्चार सम्पर्कमा आबद्ध भएका छन् । एक अर्काले सार्वजनिक रुपमा भेटघाट हुँदा होस् या हरेक कुरामा मानवले तथाकथित अश्लीलता (?) लुकाउने गरेको पाइन्छ । तर विश्वमा प्रकृतिप्रदत्त अधिकारको वकालत गर्नेहरु भने श्लीलता र अश्लीलतालाई त्यति महत्व दिँदैनन् ।
उनीहरुलाई खास शब्दमा नेचरिष्ट (प्रकृतवादी) भन्न सकिन्छ । यो भनेको उदात्तवादको एउटा पाटो हो । कुनै यस्तो स्थान जहाँ मानिस नांगै भेला हुन्छन् भन्ने सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ होला तर विश्वमा यस्ता स्थानहरु पनि रहेका छन् । त्यस्ता स्थानहरुमध्ये यहाँ केही सामुद्री किनारहरुबारे बताउन खोजिएको हो ।
विश्वमा नांगै पौडिन र घाम ताप्न पाइनेमध्ये १५ वटा समुद्री किनार (बिच) लाई उत्कृष्ट मानिन्छ । कहाँ कहाँ छन् त त्यस्तो स्थान अनि त्यहाँ के के गर्ने छुट पाइन्छ त ! सायद यो जिज्ञासा तपाईं हामीमा यति भनिसकेपछि उठिसकेको हुनुपर्छ ।